You enyochala akụkọ Google Analytics gị naanị ka ịchọta ụfọdụ ndị na-atụgharị anya dị egwu na-apụta na akụkọ ahụ? Na-aga na saịtị ha ma ọ nweghị aha gị mana enwere onyinye ndị ọzọ n’ebe ahụ. Maa amụma? Ndị ahụ anaghị ezo aka na saịtị gị.
Ọ bụrụ na ị maghị etu Google Analytics na-arụ ọrụ, ihu ọma a pikselụ agbakwunyere na ibe ọ bụla ibu nke na-ejide ụda data wee ziga ya na engine nke Google Analytics. Nchịkọta Google na-ebelata data ahụ ma hazie ya nke ọma na akụkọ ị na-ele. Ọ dịghị anwansi n'ebe ahụ!
Enwere ndepụta ndị na - akpọ spammers na Github emelitere na ndị ọrụ Piwik na - eji ma ọ mara ezigbo mma. Ana m adọta ndepụta ahụ na-akpaghị aka n'okpuru ma na-edozi ya nke ọma site na nkwupụta OR mgbe ngalaba ọ bụla (ị nwere ike idetuo na mado ya na mpaghara ederede dị n'okpuru n'ime Google Analytics):
Ga-ahụ ọtụtụ ederede ihe nkesa na plugins na ebe ahụ iji gbalịa igbochi ndị na-ekwu okwu spam na saịtị gị. Echegbula iji ha… cheta na ndị a abụghị ezigbo nleta na saịtị gị. Ihe edere ederede ndị a na-eji ghasiri GA pikselụ ozugbo site na ihe nkesa ha ma ọ bịaghịkwa na nke gị!